စပွန်ဆာ ရထား တယ် လို့ စွပ်စွဲ တဲ့ သူတွေကို ပိုင်ဆိုင် တဲ့ စီးပွားရေး လုပ်ငန်းတွေ နဲ့ အိမ်ကြီး (၆)လုံးကို ချပြ လိုက် တဲ့ ငွေဇင်လှိုင်း – Shwe Ba
Shwe Ba | October 22, 2020 | Celebrity | No Comments
ပရိတ်သတ် ကြီးရေ Myanmar Idol ပြိုင်ပွဲဝင် တစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ ငွေဇင်လှိုင်း က တော့ အောင်မြင်တဲ့ အနုပညာခရီးလမ်း ကိုလျှောက်လမ်းနေ တဲ့ ဂီတအနုပညာရှင် တစ်ယောက်ဖြစ်သလို လွန်ခဲ့တဲ့ ရက်ပိုင်းကပဲတမူးမြို့က မိသားစုနေအိမ်လေးကို ရဲရဲနီအောင် အလှဆင်ပြီး NLD ပြိုင်ပွဲကို ဝင်ပြိုင်ရာမှာ ပထမဆု ရရှိခဲ့တာကိုတော့ ပရိသတ်ကြီးလည်း သိရှိပြီးဖြစ်မှာပါနော်။ အဆိုပါဆုမှာ အိမ်ပုံလေးကိုတော့ လူမှု ကွန်ရက် စာမျက်နှာမှာ မျှဝေခဲ့သလို အိမ်ကြီးအိမ်ကောင်းနဲ့နေနိုင်တဲ့ ငွေဇင်လှိုင်းကိုတော့ မြန်မာအိုင်ဒေါမှာဝင်ပြိုင်ပြီး စပွန်ဆာရလို့ အခုလို အိမ်ကြီး ကြီးနဲ့ နေနိုင် တာဖြစ်ကြောင်း ပုတ်ခတ်သူတချို့လည်း ရှိခဲ့ပါတယ်။
ဒီလို ပုတ်ခတ်ကြတာကြောင့် အဆိုတော်ငွေဇင်လှိုင်း က လူမှုကွန်ယက်မှာ အခုလိုပဲ ပြန်လည်ဖြေရှင်းခဲ့တာပါ။ ဒါလေးတစ်ခုတော့ အတိအလင်းပြော ချင်ပါတယ် ငွေဇင်တို့အိမ်ရဲ့ သက်တမ်းကိုလာကြည့်ပါ …. Idol မပြိုင်ခင်ကတည်းက ဆောက်ပြီးသားပါလို့… စပွန်ဆာ စပွန်ဆာ ဆို တဲ့ စကားတွေ ခဏခဏ ပြန်ပြန်ကြားရတာလည်းရှိပါတယ် ပြုံးမိပါတယ်… လူတစ်ဦး တယောက် ရဲ့အကြောင်းကို သေချာမသိဘဲ နဲ့ စိတ် ထင်ရာ ဝေဖန်ပီး လျှောက်ပြောနေမယ့်အစား သေချာလေးသိဖို့ စုံစမ်းလို့ရပါတယ်.. ကျမတို့အိမ်က တမူးမြို့မှာ မီးသတ်ရုံးနဲ့ ကပ် ရပ် အာရှလမ်းမကြီးဘေး ဈေးအနောက်ပေါက်မှာ ထီးထီးကြီးရယ် အိမ်ကြီးပဲ (၆) လုံးလောက်ရှိ တာ ဒါတောင် ဆောက်နေတာ တစ် လုံး ရှိသေးတယ်ရယ်… နန်းဖာလုံဈေးမှာလည်း ဆိုင်ခန်းတွေရှိတယ် သမာအာဇီဝ လုပ်ကိုင်စားသောက်နေပါတယ်…တမူးမြို့တင်မဟုတ် ဘဲ မုံရွာ မန္တလေး ပြင်ဦးလွင် မူဆယ် ရန်ကုန် တင်မက အိန္ဒိယ နိုင်ငံ ပြည်ထဲအထိ ကျမတို့ စီးပွားရေး တွင်ကျယ်ပါတယ်သိထားဖို့ …… ရေးလို့ သာရေးရတာ ဒါတေမြင်ပီးဘောစိ ထင်မသွားကြနက် ကျမပိုင်တာမရှိဘူးရယ် ..မိဘပိုင်တာ… ကျမကတော့ မိဘလုပ်စာ ထိုင်စားနေတာ မဟုတ်ဘဲ ကိုယ့်ခြေ ထောက်ပေါ်ကိုရပ်လာတာကို ဆယ်စုနှစ်ရှိနေပါပီနော် ဒီ့ထက်ပို သိချင်ရင် ထပ်ဖြေ ပေးမယ် ကိုယ်တိုင်တော့ လာမေး…. ကျန်ခဲ့လို့ ကျမကတော့ ခုလောလောဆယ် ခွေထုတ်ပီး မွဲနေတာရယ် ဆိုပြီး အခြေအမြစ်မရှိဝေဖန်နေသူတွေ သိစေဖို့ သူ့ရဲ့ လူမှု ကွန်ရက်အကောင့်မှာ ရေးသားခဲ့ပါတယ်။
ပရိတ်သတ် ကြီးရေ ငွေဇင်လှိုင်း က တော့ သူမကို အခုလို စွတ်စွတ် ခဲ့တဲ့ သူတွေကိုအနုပညာအသိုင်းအဝိုင်းထဲဝင်မှ ငွေဇင်လှိုင်းတို့က ပိုက်ဆံ ရှိလာတာ မဟုတ်ကြောင်း စပွန်ဆာရနေပြီလို့ ဝေဖန်နေတဲ့သူတွေသိစေဖို့အတွက် အခုလို အတိအလင်းဖြေရှင်းခဲ့တာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ပရိတ် သတ် ကြီးရေ ငွေဇင်လှိုင်း ကတော့ သူမကို စွပ်စွဲတဲ့ သူတွေကို ယခုလို အတိအလင်းဖြေရှင်းခဲ့ တာပါနော်။ ဖတ်ရှုပေးခဲ့ကြတဲ့ ပရိတ်သတ် ကြီး အားလုံးကို ကျေးဇူး အထူးတင် ရှိပါတယ် နော် ။
ပရိတျသတျ ကွီးရေ Myanmar Idol ပွိုငျပှဲဝငျ တဈယောကျဖွဈတဲ့ ငှဇေငျလှိုငျး က တော့ အောငျမွငျတဲ့ အနုပညာခရီးလမျး ကိုလြှောကျလမျးနေ တဲ့ ဂီတအနုပညာရှငျ တဈယောကျဖွဈသလို လှနျခဲ့တဲ့ ရကျပိုငျးကပဲတမူးမွို့က မိသားစုနအေိမျလေးကို ရဲရဲနီအောငျ အလှဆငျပွီး NLD ပွိုငျပှဲကို ဝငျပွိုငျရာမှာ ပထမဆု ရရှိခဲ့တာကိုတော့ ပရိသတျကွီးလညျး သိရှိပွီးဖွဈမှာပါနျော။ အဆိုပါဆုမှာ အိမျပုံလေးကိုတော့ လူမှု ကှနျရကျ စာမကျြနှာမှာ မြှဝခေဲ့သလို အိမျကွီးအိမျကောငျးနဲ့နနေိုငျတဲ့ ငှဇေငျလှိုငျးကိုတော့ မွနျမာအိုငျဒေါမှာဝငျပွိုငျပွီး စပှနျဆာရလို့ အခုလို အိမျကွီး ကွီးနဲ့ နနေိုငျ တာဖွဈကွောငျး ပုတျခတျသူတခြို့လညျး ရှိခဲ့ပါတယျ။
ဒီလို ပုတျခတျကွတာကွောငျ့ အဆိုတျောငှဇေငျလှိုငျး က လူမှုကှနျယကျမှာ အခုလိုပဲ ပွနျလညျဖွရှေငျးခဲ့တာပါ။ ဒါလေးတဈခုတော့ အတိအလငျးပွော ခငျြပါတယျ ငှဇေငျတို့အိမျရဲ့ သကျတမျးကိုလာကွညျ့ပါ …. Idol မပွိုငျခငျကတညျးက ဆောကျပွီးသားပါလို့… စပှနျဆာ စပှနျဆာ ဆို တဲ့ စကားတှေ ခဏခဏ ပွနျပွနျကွားရတာလညျးရှိပါတယျ ပွုံးမိပါတယျ… လူတဈဦး တယောကျ ရဲ့အကွောငျးကို သခြောမသိဘဲ နဲ့ စိတျ ထငျရာ ဝဖေနျပီး လြှောကျပွောနမေယျ့အစား သခြောလေးသိဖို့ စုံစမျးလို့ရပါတယျ.. ကမြတို့အိမျက တမူးမွို့မှာ မီးသတျရုံးနဲ့ ကပျ ရပျ အာရှလမျးမကွီးဘေး ဈေးအနောကျပေါကျမှာ ထီးထီးကွီးရယျ အိမျကွီးပဲ (၆) လုံးလောကျရှိ တာ ဒါတောငျ ဆောကျနတော တဈ လုံး ရှိသေးတယျရယျ… နနျးဖာလုံဈေးမှာလညျး ဆိုငျခနျးတှရှေိတယျ သမာအာဇီဝ လုပျကိုငျစားသောကျနပေါတယျ…တမူးမွို့တငျမဟုတျ ဘဲ မုံရှာ မန်တလေး ပွငျဦးလှငျ မူဆယျ ရနျကုနျ တငျမက အိန်ဒိယ နိုငျငံ ပွညျထဲအထိ ကမြတို့ စီးပှားရေး တှငျကယျြပါတယျသိထားဖို့ …… ရေးလို့ သာရေးရတာ ဒါတမွေငျပီးဘောစိ ထငျမသှားကွနကျ ကမြပိုငျတာမရှိဘူးရယျ ..မိဘပိုငျတာ… ကမြကတော့ မိဘလုပျစာ ထိုငျစားနတော မဟုတျဘဲ ကိုယျ့ခွေ ထောကျပျေါကိုရပျလာတာကို ဆယျစုနှဈရှိနပေါပီနျော ဒီ့ထကျပို သိခငျြရငျ ထပျဖွေ ပေးမယျ ကိုယျတိုငျတော့ လာမေး…. ကနျြခဲ့လို့ ကမြကတော့ ခုလောလောဆယျ ခှထေုတျပီး မှဲနတောရယျ ဆိုပွီး အခွအေမွဈမရှိဝဖေနျနသေူတှေ သိစဖေို့ သူ့ရဲ့ လူမှု ကှနျရကျအကောငျ့မှာ ရေးသားခဲ့ပါတယျ။
ပရိတျသတျ ကွီးရေ ငှဇေငျလှိုငျး က တော့ သူမကို အခုလို စှတျစှတျ ခဲ့တဲ့ သူတှကေိုအနုပညာအသိုငျးအဝိုငျးထဲဝငျမှ ငှဇေငျလှိုငျးတို့က ပိုကျဆံ ရှိလာတာ မဟုတျကွောငျး စပှနျဆာရနပွေီလို့ ဝဖေနျနတေဲ့သူတှသေိစဖေို့အတှကျ အခုလို အတိအလငျးဖွရှေငျးခဲ့တာပဲ ဖွဈပါတယျ။ပရိတျ သတျ ကွီးရေ ငှဇေငျလှိုငျး ကတော့ သူမကို စှပျစှဲတဲ့ သူတှကေို ယခုလို အတိအလငျးဖွရှေငျးခဲ့ တာပါနျော။ ဖတျရှုပေးခဲ့ကွတဲ့ ပရိတျသတျ ကွီး အားလုံးကို ကြေးဇူး အထူးတငျ ရှိပါတယျ နျော ။
ကိုဗစ် ၁၉ ကာကွယ်ကြဖို့ အတွက် အသိပေး လှုံ့ဆော် ထားတဲ့ မတ်မတ် သင်ဇာ ရဲ့ အမိုက်စား ဗီဒီယိုလေး
တင်းရင်း ကိတ်လွန်းလှတဲ့ လျှို့ဝှက် အလှ တရားတွေကို ချပြ လိုက်တဲ့ အယ်လာ
အတွဲ ညီညီနဲ့ အခွီက လေး ကပြထားတဲ့ မြင့်မြတ်၊ K ညီ နဲ့ ခေးဆက်သွင် တို့ ရဲ့ TIK TOK ဗီဒီယိုလေး